Nei Mushandisi-Akagadzirwa Zvemukati Anotonga Kumusoro MuZera reSocial Media | Martech Zone
Zvinoshamisa kuona kuti tekinoroji yakashanduka sei munguva pfupi yakadaro. Yakaenda kare mazuva eNapster, MySpace, uye AOL kufona-kumusoro kuri kutonga pamusika wepamhepo.
Nhasi, mapuratifomu enhau enhau anotonga zvakanyanya mudhijitari. Kubva paFacebook kuenda pa Instagram kuenda kuPinterest, aya masocial media ave zvinhu zvakakosha zvehupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tarisa kwete kumberi kupfuura inguvai yatinoshandisa pasocial media zuva rega rega. Sekureva kwaStastista, munhu wepakati anoshandisa 118 maminetsi pazuva kuongorora masocial media network. Yakave matauriro atinoita, kuratidza manzwiro, uye kunyange kutengesa zvigadzirwa kune vatengi pasirese.
Ngatinyatso tarisei kuti mabhizinesi ari kushandisa sei nhepfenyuro yemagariro kuti ikure mhando yavo, ichichinjisa mabhurawuza asingangoiti vatengi vakavimbika
eCommerce, Yemagariro, uye UGC: Nokusingaperi Yakabatana
ECommerce world yakurumidza kuva imwe yemakwikwi anokwikwidza emabhizimusi kuti abudirire. Nemakambani ari online nepamhepo anotarisira kuita mari nekushandisa simba pasocial media, kusiyanisa zita rako kubva mumakwikwi kwave kuoma kupfuura nakare kose.
Saka vanobudirira eCommerce vatengesi vanozviita sei? Mhinduro ndeyomushandisi-inogadzirwa zvemukati.
Muchikamu chino, tichaenda zvakadzama pamusoro pekuti nei mushandisi akagadzira zvemukati ndicho chishandiso chakakosha iwe chaunogona kushandisa mune zera rezvenhau. Tichabata pane yega yega yemagariro midhiya chikuva, ichifukidza matipi uye akanakisa maitiro ekushandisa UGC uye kubatsira rako bhizinesi kutonga munzvimbo dzese dzemagariro.
Vanoti zvemukati ndimambo. Zvakanaka, isu tinotenda zvemukati-zvinogadzirwa zvemukati izvozvi mambo. Huya uone kuti sei.
Chinja rako re Instagram bhizinesi peji ive shoppable Wondland
Tiri kurarama munyika umo kutarisisa kwedu kwakaganhurirwa. Pamasocial media chaizvo, vashandisi vanofarira kuongorora uye kupururudza pane kuverenga zvihombe zvemavara. Ichi chikonzero nei Instagram rave simba rakadai kuti riverengerwe, kuveza chikamu chikuru chevashandisi vakavimbika nepikicha-centric yavo.
Iyo data inotsigira kubudirira kwavo. Muchokwadi, yenzvimbo dzese dzemagariro, traffic kune eCommerce zvitoro kubva pa Instagram inogara yakarebesa onsite pane inoputika 192.4 masekondi. Iyo chati iri pazasi inoratidza mashandisiro anoita Instagram kusvika kumakwikwi.
Saka unoshandisa sei simba re Instagram uye kushandisa chikuva kutanga kutengesa? Mushandisi-inogadzirwa zvemukati, hongu.
Vanhu vari mukati vanovimba mafoto uye zvemukati kubva kune chaiko, vatengi vechokwadi kupfuura kubva kune vatengesi ivo pachavo. Inoita kuti vatengi vaone kuti zvigadzirwa zvaunotengesa zviri kunakidzwa nevatengi pasi rese.
Edza kubatanidza mifananidzo-inogadzirwa nemifananidzo pa Instagram nechinhu chinonakidza nyowani ichangobva kuburitswa naJotpo inonzi Shoppable Instagram. Shoppable Instagram inobvumidza eCommerce mabhenji kushandura yavo Instagram maburi kutengeka. Maitiro acho ari nyore chaizvo.
Iyo yakafanana saiti inosunganidzwa mune yako Instagram bio, iyo shoppable Instagram dhizaini iri girazi mufananidzo weako epakutanga Instagram peji. Izvi zvinovimbisa kuti vatengi vari kuwana zvakafanana nyore-kupora-chiitiko icho chavanotarisira, asi nekuwedzera kwekuita izvo zvemukati zvavanoona zvichitengwa. Kugadzira izvo zvemukati izvo zvavanoona zvinogadzirwa nemushandisi chishandiso chakasimba zvine simba.
Muenzaniso wakanaka wemuCommerce mutengesi anotora mukana wakazara wekubatanidza UGC uye Shoppable Instagram iri Hamboards. Mutengesi anozivikanwa weLandsurfing, vakaona simba rekushandura mapikicha akagadzirwa nevashandisi pa Instagram kuita ma link anotengwa nekukanya bhatani. Sezvauri kuona pazasi, mhedzisiro shopu yakachena, yakafemerwa-nevatengi inoita kunge mushandisi haana kumbosiya Instagram:
Tevedza kutungamira kweHamboard, uye vaviri Shoppable Instagram uye mushandisi-inogadzirwa zvemukati wekupedzisira eCommerce kubudirira pa Instagram.
Shandisa UGC wongororo kuita yako Facebook kushambadza kusimuke kubva muboka revanhu
Isu tese tinoziva nyaya yaFacebook kune kugadzikana kwevanhu. Kubva pane zano mune yeHarvard dorm kamuri kuenda kune yakawanda-mabhiriyoni emadhora bhizinesi, Facebook ndiyo musimboti wekubudirira midhiya yenhau mune 21st century. Ipuratifomu inoenderera ichichinja, ichigara ichichinjisa matauriro atinoita nekutaurirana.
Kune chero bhizinesi, panogona kunge pasina nzvimbo iri nani yekushambadzira zvigadzirwa zvako pane paFacebook. Kwete chete ivo vanoita kuti maitiro acho ave akareruka sezvinobvira, asi kugona kusvika kweako kushambadzira kune vangangove vatengesi kunogona kuve kusingaperi.
Nzira huru yekushambadzira kwako inokwezva vashandisi veFacebook iri kushandisa zvemukati-zvinogadzirwa kubva kune vatengi vekare. Nekungoratidzira ongororo yakanaka kubva kune anofara mutengi mune yako Facebook kushambadza, ROI yechigadzirwa icho inokwira zvakanyanya.
tora MYJS, online online jewelry store, semuenzaniso. Kambani inobudirira yeJewelry yezvizvarwa zvitatu, ivo vakakurumidza kuona simba renhau rezvemagariro uye kudiwa kwekuvepo pamhepo.
Iine Facebook kuve yakadaro yemagariro media, MYJS yakanzwisisa kushambadza paFacebook kwaive kukosha. Pavakatanga kushandisa Yotpo uye UGC mune yavo Facebook ads nekushandisa wongororo kubva kune vekare vatengi, metric yavo yakagadziridzwa zvakanyanya UGC yakaguma nemutengo-wega wekutora kuderera kwe80%, panguva imwe chete uchigadzira 200% kuwedzera mukukanda-kuburikidza nemutengo zvakare.
Iyo Facebook yekushambadzira nzvimbo yakazara nemazana ezviuru emabhizinesi. Uchishandisa UGC mukati meako Facebook kushambadzira inogona kungova mhinduro yekuve neyako kumira.
Pinterest: Yako yakavanzika midhiya nhau chombo chinoshuvira mushandisi-inogadzirwa zvemukati
Kazhinji isingatariswe kana uchitaura nezve makuru makuru enhau mapuratifomu, Pinterest inobhururuka pasi pe radar kune akawanda mabhenji ari kutengesa online. Uku kufunga kusiri iko kwekuti Pinterest haina kukosha sedzimwe kutarisirwa nekambani chero ipi inowira pasi peiyi tambo yekufunga. Pinterest ndeimwe yeanokurumidza-kukura ezvenhau mapuratifomu ane anoshamisa anoshanda, anoshuvira kutenga mushandisi base.
UGC inotamba zvakasiyana, asi zvakaenzana sekukosha kwebasa paPinterest. Nemabhizinesi anoshandisa "mabhodhi" uye "mapini", Pinterest ndiyo ipuratifomu yakakwana yekutendera vatengi kuratidza kuonga nekukora zvemukati-zvakagadzirwa zvemukati kune aya mabhodhi.
Imwe yemhando dzakabudirira eCommerce zvigadzirwa, Warby Parker, inoshandisa UGC paPinterest zvakakwana. Vakagadzira bhodhi rakanzi Shamwari Dzedu Mumaframe Edu, uko kwavanoratidzira vakakurumbira online vapesvedzera vakapfeka magirazi avo munzvimbo dzakasiyana siyana. Iine vanopfuura zviuru makumi matatu nezvishanu vateveri pane ino bhodhi chete, Warby Parker akaziva uye akashongedzerwa pamukana wekushandisa zvemushandisi-zvinogadzirwa zvemukati sechikamu chepakati chavo Pinterest kushambadzira zano.
Tiri kurarama munyika inotongwa nevezvenhau
Isu tinowana ruzivo rwedu kubva kunhau feeds pachinzvimbo chemapepanhau. Isu tinotarisa kumusoro ruzivo pane injini dzekutsvaga panzvimbo pemaraibhurari; zvese zvave kuwanikwa pamazano ezvedu zvemadhijitari zvigunwe. Kunyangwe ichi chiri chinhu chakanaka kana chakashata chevanhu chiri chekupokana neruzhinji uye maonero. Izvo zvisiri zvekupokana, zvisinei, kukosha kwe UGC mukati mezvemagariro enhau. Mushandisi-inogadzirwa zvemukati inogadzira pfungwa yekuvimbika uye yechokwadi pakati pekambani nemutengi, izvo pane zvemagariro midhiya isingawanzo kuita kuita. Kunyangwe iri Facebook, Instagram, kana Pinterest, mushandisi inogadzira zvemukati uye zvemagariro midhiya zvichasungwa pamwechete kwemakore uye makumi emakore ari kuuya.
Tags: Content MarketingInstagramPinterestshoppable instagramugcmushandisi akagadzira zvemukatiYotpo
Corey Bloom ndiye Mukana wekushambadzira maneja pa Yotpo. Kana iye asiri kutaura nezve zvemukati-zvinogadzirwa zvemukati, iwe unogona kumuwana iye achitsvaga inotevera inotevera nzvimbo yekudya.